चुइगम निलो भने के हुन्छ ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यचुइगम निलो भने के हुन्छ ?
चुइगम चपाउने बानी प्राय मानिसमा हुने गर्छ । चुइगमबाट आउने रस स्वादिलो हुन्छ त्यसैले मानिसहरु चुइगम चपाउने गर्छन् । त्यसतै यसलाई मुखबाट फुलाउदै पड्काउनुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । कहिलेकाँही हामी चुइगम चपाउदा चुइगम निल्ने गर्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीमा चुइगम भित्रा गैर आन्द्रामा टासिने र विभिन्न समस्या आउने जस्ता कल्पना हुन थाल्छ ।
खासगरी चुइगम गम, मिठाई, रंग र विभिन्न खाले स्वाद मिलेर बनेको हुन्छ । यसमा बोसो, मैन, इलास्टोमरर्स, रेजिनजस्ता तत्वहरु हुन्छन् । पेटले अरु खाना जसरी यसलाई सजिलै पचाउँन सक्दैन । जब हामी चुइगम मुखमा राख्छौ, मुखमा उत्पन्न हुने र्यालले पचाउने प्रत्यन गर्न थाल्छ । तर, धेरै जसो गमबाट बनेको चीजहरु अपाच्य हुन्छन् । गम टाँसिइरहने भएपनि आन्द्राको शक्तिसँग तालमेल मिल्दैन र निलिएको गम आन्द्रामा टाँसिएर बस्न सक्दैन। र अन्त्यमा आन्द्राले बाहिर निष्कासन गर्छ । त्यसैले पेट हुँदै चुइगम एक वा दुई दिनभित्रमा शौचालयसम्म पुग्ने गर्छ । चुइगमको सानो टुक्रा वा बट्टाको पुरै चुइगम निलिएमा पाचन प्रक्रियालाई असर भने पुर्याउँछ। बिशेष गरी बच्चाहरु जसको पाचन प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, चुइगम निलिनु स्वस्थकर मानिदैन ।